Isenzo sokumangalela iklasi ngokuchasene neApple kwimizobo yeMacBook Pro 2011 sele iphendulwe kwiminyaka esi-7 kamva | Ndisuka mac
Isenzo sokumangalela iklasi ngokuchasene neApple kwimizobo yeMacBook Pro 2011 sele iphendulwe kwiminyaka esi-7 kamva
UManuel Alonso | 14/05/2021 19:00 | Izaziso
Ngo-2014, kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, sikuxelele ukuba abanye abasebenzisi bajoyine kwaye bafaka isimangalo sokwenza iklasi ngokuchasene neApple ngenxa yemeko embi kunye nokusebenza kweeGPU kwiMacBook Pro 2011. Kwakukho ukuqaqamba kwiGPU yabo eyabangela ukuba abo bachaphazeleke kwimifanekiso emenyezelayo amaxesha ngamaxesha kumatshini wabo . Abanye abasebenzisi batshintshe igrafu ngokuhlawula iindleko kwaye yiyo loo nto bayibanga kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Ngoku ubulungisa buphendulile, ubuncinci eCanada.
I-Apple ize ukutshintsha ezinye zezi khompyuter ziye kwiindidi zabachaphazelekayo, kodwa kancinci kancinci abasebenzisi abaninzi baphuma benengxaki efanayo. Imeko ayizinzanga kwaye abasebenzisi abaninzi bebesele behlawule iindleko ezibangele utshintsho kwigrafu. Kuba banovakalelo bagqibe kwelokuba bajoyine kwaye fayile ityala lesenzo seklasi ukuze inkampani ihlawule iindleko.
Ngoku eQuebec banokufumana imbuyiselo yokulungiswa emva kwetyala. Phantse iminyaka esixhenxe kamva, inkundla yaseKhanada ekugqibeleni yasivuma isigqibo. Iya kukhokelela ekubeni iApple ibuyise abathengi abachaphazelekayo. Njengoko kuxeliwe yi-PCMag, Isivumelwano siqinisekisiwe kule veki yiNkundla ePhakamileyo yephondo laseQuebec. Ithi nabani na othenge i-2011 15- kunye ne-17-intshi iMacBook Pro ene-AMD GPU kwaye uhlala eQuebec kufanelekile ukuba abuyiselwe imali ngalo naluphi na ulungiso olunxulumene noko oluhlawulwe ngewaranti.
Ityala lathi abathengi banyanzelwa ukuba bahlawule ukuya kuthi ga kwi-600 yeedola ukulungiswa. Isivumelwano sichaza ukuba abanini beMacBook Pro 2011 bachaphazele banokufumana i-175 yeedola zaseCanada (malunga nee-euro ezingama-120), kuzo naziphi na iingxaki abanazo, kunye nembuyekezo epheleleyo yezinye iindleko zokulungisa.
Isivumelwano sinokufikeleleka Ngale webhusayithi que iya kuhlaziywa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ngeenkcukacha ezithe kratya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Isenzo sokumangalela iklasi ngokuchasene neApple kwimizobo yeMacBook Pro 2011 sele iphendulwe kwiminyaka esi-7 kamva
I-Lenovo ikhokelela kwindlela yokutshaja i-Apple Magic Mouse
Ekhaya ngaphambi kwexesha elimnyama XNUMX I-trailer yokuqala ngoku iyafumaneka